Madaxweyne Farmaajo oo la kulmay qaar ka mid ah haweenka Soomaaliyeed. | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Madaxweyne Farmaajo oo la kulmay qaar ka mid ah haweenka Soomaaliyeed.
Madaxweyne Farmaajo oo la kulmay qaar ka mid ah haweenka Soomaaliyeed.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullahi Farmaajo oo kulan la qaatay qaar ka mid ah Haweenka Soomaaliyeed ayaa kala hadlay xoojinta doorka ay ku leeyihiin dowladnimada, horumarinta dhaqaalaha, dib u heshiisiinta iyo xoojinta midnimada Shacabka Soomaaliyeed.
Madaxweynaha ayaa tilmaamay mudnaanta gaarka ah ee dowladdu ay siisay kobcinta doorka Haweenka ee siyaasadda, maamulka iyo arrimaha bulshada, isaga oo ku ammaanay sida waddaniyadda leh ee ay ugu taagan yihiin horumarinta dalka, ka shaqeynta danta guud iyo dib u dhiska dowladnimadeenna.
“Abaal weyn ayay nagu leeyihiin Haweenka Soomaaliyeed, xilligii xornimo doonka waxa ay ahaayeen udub-dhexaadka halgankii xorriyadda iyo midnimada. Xilliyadii duruufaha adag ay soo wajaheen dalkeenna waxa kaliya ee loo baxsaday waxa ay ahaayeen dumarka Soomaaliyeed”.
Sidoo kale, Madaxweynaha Jamhuuriyadda oo dhageystay talooyinka iyo weydiimaha Haweenka ka soo qeyb galay kulankan ayaa adkeeyay muhiimadda ay leedahay in dowladdu ay xoojiso fursadaha shaqo ee Haweenka iyo ilaalinta saamigooda siyaasadeed iyo maamul ee dalka.
Dhankooda, Marwooyinka ka soo qeyb galay kulanka ayaa Madaxweynaha uga mahad celiyey mudnaanta uu siiyey Haweenka iyo kalsoonida uu ku qabo doorkooda dib u dhiska dalka, hirgelinta qorsheyaasha Qaran ee dhanka horumarka, adkeynta midnimada iyo ka miro-dhalinta dadaallada dib u heshiisiinta.
Madaxweyne Farmaajo oo la kulmay qaar ka mid ah haweenka Soomaaliyeed. was last modified: November 12th, 2020 by Admin
Diyaarad Rakaab ah oo ku burburtay Pakistaan
AFRICOM iyo DFS oo War kasoo saaray duqeyn ay ka geysteen Degmada Jilib ee Gobolka Jubada Dhexe.
Ciidamo badan, gaadiid dagaal & diyaarado oo lagu arkay Baydhabo + Ujeedka